» क्रूरताको पराकाष्ठा: जसले आफ्नै १८ वर्षीया छोरीको टाउको काटेर यसरी लिएर गए प्रहरी चौकी !
क्रूरताको पराकाष्ठा: जसले आफ्नै १८ वर्षीया छोरीको टाउको काटेर यसरी लिएर गए प्रहरी चौकी !
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०६:३४
भारतको उत्तर प्रदेशको हरदोई जिल्लामा भयानक घटना भएको छ। एक व्यक्तिले आफ्नै १८ वर्षीया छोरीको टाउको काटेर प्रहरी कार्यालय पुगेका हुन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार छोरीको काटिएको टाउकोसहित महिला थाना पुगेर उनले प्रहरीसमक्ष आफूले हत्या गरेको बताएका हुन्। त्यसो भनिरहँदा उनको अनुहारमा एकरत्ति पनि पश्चाताप नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
दुई दिनदेखि छोरीको हत्या गर्ने योजनामा थिए उनी
प्रहरी नै आश्चर्यचकित भए !
सर्वेशले प्रहरीसमक्ष भने, ‘साहेब, मैले आफ्नी छोरीको घाँटी काटिदिएँ।’ उसको कुरा सुनेर प्रहरी पनि आश्चर्यमा परे। त्यसपछि थानाबाट प्रहरी टोली घटनास्थल पुग्यो। जहाँ रगतले भिजेर उनकी छोरी लडिरहेकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले हत्या मुद्दा दर्ता गरी ती बाबुलाई नियन्त्रणमा लिए। नेपालखबरबाट